ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည် Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုကိုလိုက်နာပါသလား။ (2013) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
comments: ဒီလေ့လာမှု deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်သိသိသာသာအငယ်စတင်ခြင်းအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်း porn အသုံးပြုမှုကိုလူစိမ်းပစ္စည်းပစ္စယသို့တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့ဆက်စပ်ကြောင်းအတည်ပြု။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီတူညီတဲ့အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်ရန်ပိုမိုဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖြစ်သောသည်းခံစိတ်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
လေ့လာမှု 2016 ပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးခဲ့သည်
Volume ကို 29, Issue5စက်တင်ဘာလ 2013, စာမျက်နှာများ 1997-2003
Marcus K. ရော်ဂျာb
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, bestiality နှင့်ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုး။
33 (5.2%) ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် - 16 (12.5%) ယောက်ျားနှင့် 17 (3.4%) အမျိုးသမီးတွေ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ porn အသုံးပြုရန်စတင်ခြင်း၏ငယ်ရွယ်သောအသက်နောက်ပိုင်းတွင် deviant porn ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။
ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့် bestiality ညစ်ညမ်းနှစ်ဦးစလုံးကိုလောင်လေ၏။
Deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုနောက်ကိုလိုက်လိမ့်မည်။
ဒီလေ့လာမှုက deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦး nondeviant ဖြစ်ခြင်းမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းအတွက် Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုနောက်တော်သို့လိုက်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဒီတိုးတက်မှုစောငျ့ရှောကျနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တမ်းနမူနာကောအင်တာနေရှင်နယ်ရဲ့ (SSI) မှ 630 ဖြေဆိုသူ panel ကအင်တာနက်ကိုနမူနာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ-သာ, bestiality နှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကဲဖြတ်အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။ desensitization တစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအတွက်စေ့စပ်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုသို့ပြောင်းလဲဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းကိုအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်ဖြေဆိုသူ " 'စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" ကိုဆုံးဖြတ်ရန်တိုင်းတာခဲ့သည်။ နှစ်ရာ 54 ဖြေဆိုသူ nondeviant အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့, 54 တိရိစ္ဆာန်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးဖော်ပြခဲ့သည်နှင့် 33 ကလေးညစ်ညမ်းသုံးပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်မဟုတ်ဘဲရုံတစ်ခုတည်းကိုသာကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးထက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနဲ့တိရစ္ဆာန်ညစ်ညမ်းနှစ်ဦးစလုံးလောင်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များ deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်အသက်ငယ် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" နဲ့တစ်ဦးချင်းစီအတွက် Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုနောက်ပိုင်း "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" နဲ့ရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ deviant ညစ်ညမ်း (bestiality သို့မဟုတ်ကလေးက) တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်နောက်တော်သို့လိုက်အကြံပြု. ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်သုတေသနအကြံပြုချက်များဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
သုတေသနအရကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများတွင်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များပါ ၀ င်ရုံသာမကသဘာဝအလျောက်လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည် (cf, Quayle & Taylor, 2002; Quayle & Taylor, 2003) ။ တကယ်တော့ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်တိုက်စားသုံးသူများနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကပြစ်မှုကျူးလွန်သူအချို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများ (သို့) အစာစားချင်စိတ်ကျခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်“ အလွန်အစွန်းရောက်သောအရာများကိုရယူသည့်အချိန်တိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစေ့စေ့စပ်စပ်” ရွှေ့ပြောင်းရန်အကြံပြုခဲ့သည် (Quayle & Taylor, 2002, p ။ 343) ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများကိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း (Quayle & Taylor, 2003) ။ ထို့အပြင်အချို့စားသုံးသူများကသူတို့ပုံရိပ်များကိုသူတို့ရရှိနိုင်။ ရရှိနိုင်သည့်အတွက်ကူးယူခဲ့သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ အပြုအမူများသည်အဓိကအားဖြင့်ကလေးများအပေါ်လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုများမဟုတ်ဘဲအတင်းအကျပ်ပြုကျင့်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်လာသည် (Basbaum, 2010) ။ သို့သော်ကြိုတင်လေ့လာမှုများသည်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသည့်ကလေးလိင်ဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများ၏ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအခြေပြုကိုယ်စားပြုနမူနာများ (ဤနေရာတွင်အသုံးပြုထားသည့်အတိုင်း) ကိုအသုံးပြုပါကသုတေသီများသည်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများ၏စုဆောင်းမှုကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာနှင့်ပြည့်စုံသောနားလည်မှုရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။
တချို့ကကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးသူ paraphilic သဘောထားတွေကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျအဆင့်ထက်ကလေးငယ်များအတွက်တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတစ်ခုရှုပ်ထွေးပြီးခင်းကျင်း, ပြ။ Endrass et al အားဖြင့်ကောက်ယူတဲ့လေ့လာမှုမှာ။ (2009), ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတရားစွဲဆို 231 ယောက်ျားကနေပုံရိပ်တွေကိုများစုဆောင်းခြင်းလည်း deviant ညစ်ညမ်း၏အခြားအမျိုးအစားများကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ အထူးသနီးပါးသုံးပြစ်မှုကျူးလွန်သူထဲကအနည်းဆုံး deviant ညစ်ညမ်းသုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအမျိုးအစားများကိုစုဆောင်းနှင့်အတူနမူနာကောက်ယူကလေးညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော bestiality, မစင်, ဒါမှမဟုတ် sadism အဖြစ် deviant ညစ်ညမ်းအနည်းဆုံးတဦးတည်းကိုအခြားအမျိုးအစား၏ 60%, (Endrass et al ။ 2009) ။ ဒါဟာသုတေသနအင်တာနက်ကိုကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ၏အထွေထွေအဆင့်ထက်ထိုကဲ့သို့သော pedophilia အဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ် paraphilia, ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါအရာ, deviant ညစ်ညမ်းတဲ့ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးစုဆောင်းနေကြသည်အများစုအကြံပြုထားသည်။ တနည်းအားဖြင့်အချို့သောကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးသူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်သိချင်စိတ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပြသူသာမန်လူဦးရေအတွင်းအတိုက်အခံများဖြစ်နိုင်သည်။
ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက်တည်ရှိပေမယ့်, အနည်းငယ်မျှသာအရေအတွက်သုတေသနလေ့လာမှုများညစ်ညမ်း (ဥပမာအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်း) ၏ nondeviant ပုံစံများကိုအသုံးပြုဖို့သူအရှိမရှိတစ်ဦးချင်းစီ၏မေးခွန်းကိုအကဲဖြတ်ကြညစ်ညမ်း၏ deviant ပုံစံများကိုစားသုံးဘို့ သာ. ကြီးမြတ်သောသူစွန့်စားမှု (ဥပမာ, တိရစ္ဆာန်နှင့်ကလေးညစ်ညမ်း) မှာရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ် deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူတစ်ဦး nondeviant ဖြစ်ခြင်းထံမှရှိမရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းအတွက်သော့ချက်အချက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှု (cf, ဟော်လန်, 1988) ကိုလိုက်နာပါသနည်း စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှင့်စပ်လျဉ်းသုတေသနအများစုလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက် (cf, ရေလွှမ်းမိုး, 2009) မှာညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏စိတ်ခံစားမှုအကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံစိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်, Mitchell, Wolak နှင့် Finkelhor (2007) 10 တစ်နှစ်ကြားရှိမှ 10 ၏ 17% ကိုတွေ့ညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုအားဖြင့် "အလွန်သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းစိတ်ဆိုး" ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, McKee (2007) သူတို့၏ Post-pubescent ထိတွေ့တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သော်လည်း "ရယ်စရာ" နှင့် "နည်းနည်းအကျိုးစီးပွား" နဲ့အဖြစ်ညစ်ညမ်း၎င်းတို့၏ Pre-pubescent ထိတွေ့ဖော်ပြထားသူတစ်ဦးငယ်ရွယ်စဉ်မှာညစ်ညမ်းဖို့သူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုနှင့် ပတ်သက်. , 46 သြစတြေးလျအင်တာဗျူး "ကျမ်းပိုဒ်၏ညာဘက်" (စ။ 10) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သုတေသနလူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြုထားသည်။ အထူးသ Johansson နှင့်Hammarén (2007) ငယ်ရွယ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်တညဥ့်ရပ်တည်ချက်ဖူးဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့နှင့်အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်း၏ငယ်ရွယ်စားသုံးသူလိင်ပြင်းထန်တဲ့သဘောထားတွေနဲ့အပြုအမူတွေပြပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည် (cf, ရေလွှမ်းမိုး, 2009) ။
ယေဘုယျအားယခင်သုတေသနအဓိကအားဖြင့်လူငယ်များအဘို့အညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုအဘို့အကို "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" ပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသုံးပြုမှု, အစား nondeviant နှင့် deviant ညစ်ညမ်း၏မလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှုထက်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်လက်ရှိလေ့လာမှုနမူနာဖြေဆိုသူကတည်းက nondeviant နှင့် deviant ညစ်ညမ်း၏အဓိပ္ပာယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လက်ရှိညစ်ညမ်းမှုဥပဒေများအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းပထမပြင်ဆင်ချက် (ချွင်းချက်ရှိပါတယ်ပေမယ့်) ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်, သို့သော်ကလေးညစ်ညမ်းနှင့်တိရစ္ဆာန်ညစ်ညမ်း (bestiality) စကားရပ်၏ညစ်ညမ်းသောထို့ကြောင့်တရားမဝင်ပုံစံများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအဖြစ် operationalized ခဲ့သည် nondeviantတိရစ္ဆာန်နှင့်ကလေးညစ်ညမ်းအဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ခဲ့သော်လည်း deviant ညစ်ညမ်း၏ပုံစံများ။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိတရားဝင်လူမှုရေးထိန်းချုပ်မှု (ဥပဒေများကို) နေသော်လည်းညစ်ညမ်းသုံးခုစလုံးအမျိုးအစားများအင်တာနက်ပေါ်ရှိအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-သာ, တိရိစ္ဆာန် (bestiality), နှင့်ကလေးညစ်ညမ်း: ထို့ကြောင့်, တစ်ဦးချင်းစီကိုပထမဆုံးသိလျက်, အဘို့ကိုရှာဖွေဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်လဲလှယ်သောအရာကိုအသက်အရွယ်မှာစူးစမ်းဒီလေ့လာမှု / အောက်ပါညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများ shared ။ ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံအသက်အရွယ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု variable တွေကိုတို့တွင်အပြန်အလှန်ဆန်းစစ်အသုံးပြုပုံစာရေးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု facilitated ဖြစ်စေဘယ်လို nondeviant နားလည်ရန်မျှော်လင့်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းပို deviant ပုံစံများမြားတှငျပါဝငျခွငျး၏ဖြစ်နိုင်ခြေခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
အဓိကရည်ရွယ်ချက် (၃) ရပ်သည်လက်ရှိလေ့လာမှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးရည်ရွယ်ချက်မှာစတင်ခြင်း၏သက်တမ်းသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်အန္တရာယ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော်၊ အစောပိုင်းအသက်အရွယ်တွင်အရေးမပါသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုကျင့်သုံးသောသူများသည်နောက်ကျလာသောအသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုပုံစံများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ပိုဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယရည်မှန်းချက်မှာအမျိုးသမီးဖြေကြားသူများသည်အင်တာနက်ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများစားသုံးခြင်းရှိ၊ ယခင်သုတေသနကကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူအများစုသည်အမျိုးသားများဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤနမူနာအများစုသည်မှုခင်းသို့မဟုတ်လက်တွေ့လူ ဦး ရေ (cf, Babchishin, Hanson, & Hermann, 2011) မှဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အင်တာနက်အခြေပြုသုတေသနပြုလေ့လာချက်များအရအမျိုးသမီးများသည်ယခင်ကမျှော်မှန်းထားသည်ထက်ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည် (cf, Seigfried, Lovely, & Rogers, 2008; Seigfried-Spellar & Rogers, 2010) ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုသည်အမျိုးသမီးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုတရား ၀ င်သို့မဟုတ်လက်တွေ့နမူနာမဟုတ်ဘဲအင်တာနက်အသုံးပြုသူနမူနာတွင်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုမြင်သာစေရန် (အကဲဖြတ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း) ကိုအထူးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလေ့လာမှု၏တတိယရည်ရွယ်ချက်မှာညစ်ညမ်းအမျိုးအစားသို့ဖြေဆိုသူပြိုလဲခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းစူးစမ်း: none, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-သာ, တိရိစ္ဆာန်သာ, ကလေး-သာ, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-တိရိစ္ဆာန်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူကလေး, တိရစ္ဆာန်ကလေးနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ -child-တိရိစ္ဆာန်။ ဒါဟာအတိုင်းအတာများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Self-အစီရင်ခံကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုအသုံးပြုသူများသည်၏အခြားအမျိုးအစားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Self-အစီရင်ခံစာအရွယ်ရောက်ပြီးသူနဲ့တိရစ္ဆာန်ညစ်ညမ်းအပြုအမူတွေကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်ရှိမရှိ၏အကဲဖြတ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ အနည်းငယ်သုတေသနလေ့လာမှုများအထူးသညျအငျတာနကျကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများက (စာနယ်ဇင်းများတွင် cf, Seigfried-Spellar,) ကစုဆောင်းဗီဒီယိုအမျိုးအစားမျိုးစုံအကဲဖြတ်ပါပြီ။ ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုနောက်တော်သို့လိုက်လျှင်အထူးသ, ထို့နောက်၏ no "ဆိုတဲ့သီးသန့်စားသုံးသူ" အဲဒီမှာဖြစ်သင့် သာ ကလေးညစ်ညမ်း; အစား, ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအ deviant နှင့် nondeviant ညစ်ညမ်း၏အခြားပုံစံများမြားတှငျပါဝငျခွငျးသတင်းပို့သင့်ပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမကယခင်သုတေသနအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်အသက်ငယ် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" သတင်းပေးပို့သူကိုတစ်ဦးချင်းစီဟာနောက်ပိုင်းမှာ "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" သတင်းပေးပို့သူကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ထားပါတယ်ကတည်းကဒီလေ့လာမှုကသဘာဝရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ မြော်လင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းနောက်ပိုင်းတွင် deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" အကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်သုတေသနပြု၏ကျိုးနွံငွေပမာဏကလေးညစ်ညမ်း collection များကို deviant နှင့် nondeviant ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များနှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သည်ဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးသူအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာနှင့် bestiality ညစ်ညမ်းနှင့်ကလေးညစ်ညမ်း၏တစ်ဦးတည်းသောစားသုံးသူဖြစ်လျော့နည်းဖွယ်ရှိလောင်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်တွေးဆသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စာရေးသူတစ်ဦးလိင်ခြားနားချက်ကိုရှာဖွေမျှော်လင့်ထား; အထူးသ, ယောက်ျား Self-သတင်းပို့ကလေးညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိလိမ့်မည် (ဥပမာ Babchishin et al ။ , 2011) ။ ထူးခြား, နမူနာနည်းစနစ်အတွက်ကွာခြားချက်ကြောင့်ဒီအင်တာနက်အခြေပြုသုတေသနလေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမြင့်မားပျံ့နှံ့ရှိရလိမ့်မည်။
2 ။ နည်းလမ်း
လက်ရှိလေ့လာမှုအထီးနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထံမှအနည်းဆုံး 18 အသက်အရွယ်နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေရှိနသောသူအမျိုးသမီးဖြေဆိုသူများ, နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦး panel ကအင်တာနက်ကိုနမူနာပေးထားတဲ့စစ်တမ်းနမူနာကောအင်တာနေရှင်နယ် (SSI), အသုံးပြုသွားမည်။ အဲဒီအစားဖြေဆိုသူခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်အင်တာနက်ကို snowballing ထက်အဲဒီ client များသို့မဟုတ်ဖြေဆိုသူပြီးသား (ပဲမဆိုဆုလာဘ်သို့မဟုတ်မက်လုံးပေးအရည်အချင်းပြည့်မီသို့မဟုတ်ဆိုကြသည်မှစစ်တမ်းတစ်ခုပေါ်တွင်လဲလျောင်း၏အန္တရာယ်မှာနေသောတစ်ဦးချင်းစီကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် SSI ရဲ့အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စိစစ်အတည်ပြုသည့်စနစ်မှတစ်ဆင့်ပြီ SSI, 2009) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, SSI စစ်တမ်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာ (SSI, 2009) ယူနိုင်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းကနေအတူတူပင်လူတစ်ဦးကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့အဲဒီ client များသို့မဟုတ်ဖြေဆိုသူလူမှုရေးအရအထိခိုက်မခံသည့်အကြောင်းအရာများဆီသို့သဘောထားများနှင့်အပြုအမူကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်သောအရာ, သုတေသနဖြစ်စဉ်ကိုသူ့ဟာသူ၌ဤလေ့လာမှု၏ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်ယုံကြည်မှုအဖြစ်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။
"Internet ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူယေဘုယျလူဦးရေ," ထက်လက်တွေ့သို့မဟုတ်မှုခင်းလူဦးရေကနေနမူနာများနှင့် Self-ထုတ်ဖော်အတွက်တုံ့ပြန်ရဲ့ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းထံမှဖြေဆိုသူအမြည်းဖို့ဆန္ဒအပေါ် အခြေခံ. , ဒီနမူနာနည်းစနစ်ကအကောင်းဆုံးများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် လက်ရှိလေ့လာမှု။ စားပွဲတင် 1 မှာပြထားတဲ့အတိုင်း 630 ဖြေဆိုသူအွန်လိုင်းစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့; 502 (80%) အမျိုးသမီးများနှင့် 128 (20%) ယောက်ျား (ခဲ့ကြသည်မှတ်စု: ဤသည်မှာကျားမမညီမျှမှု) နောက်ပိုင်းတွင်စက္ကူမှာဆှေးနှေးပါလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားနမူနာများ၏အများစု (အဖြူခဲ့သည်n 519-82.4 နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြား = 36, 55%), (n = 435, 69%), လက်ထပ် (n = 422, 67%), နဲ့ 68% (n = ဖြေဆိုသူ၏ 427) အချို့သောကောလိပ်သို့မဟုတ် Post-ဘွဲ့ရအလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
စတင်ခြင်း၏တုံ့ပြန်ရဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပြုအမူများနှင့်အသက်အရွယ်ဟာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစစ်တမ်း (; Seigfried, 2007; Seigfried-Spellar, 2011 Ops) ၏ Short ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ မူရင်း Ops ဖြေဆိုသူ '' ညစ်ညမ်းအပြုအမူတွေ, ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရှာဖွေအပါအဝင်ရယူသုံး, ဒေါင်းလုပ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကပုံရိပ်တွေ၏ဖလှယ်အကဲဖြတ်ထားတဲ့ 54 မေးခွန်းများကို, ပါဝင်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းတစ်ဦးချင်းစီ featuring "ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ ကျော်လွန် တစ်ဦးချင်းစီ featuring "ကလေးညစ်ညမ်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသော်လည်း" 18 နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်, အောက် 18 နှစ်ပေါင်းအသက်။ တစ်ဦးချင်းစီ featuring "တိရိစ္ဆာန်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် bestiality ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်" ကျော်လွန် 18 နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ် နှင့် တိရစ္ဆာန်။ "
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်စတင်ခြင်း၏တုံ့ပြန်မယ့်အသက်အရွယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစစ်တမ်းမှသာလျှင် 15 ပစ္စည်းများ, ဒီလေ့လာမှုတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အားလုံး 15 မေးခွန်းများကိုတူညီတဲ့အဖြေကို format နဲ့အလုပ်။ အောက်ပါတို့သည် Ops ကနေစတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာနမူနာမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: "သင်သိလျက်တစ်ဦးချင်းစီ featuring ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုရန်အလို့ငှာ website တစ်ခုဝင်ရောက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုအဟောင်းကို အောက် ? 18 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်က "ဖြေဆိုသူ '' ရွေးချယ်မှုများစတင်ခြင်းပစ္စည်းများအသက်အရွယ်အဘို့ဖြစ်ကြ၏အသက်, 12 ၏ 12 အောက်မှာနှစ်အသက်, 16 ၏ 16 အောက်မှာနှစ် 19 အောက်မှာမှအသက်, 19 ၏ 24 နှစ်အောက်, ငါ့ကိုရန်လျှောက်ထားပါဘူး အသက်, 24 အသက်အရွယ်နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေနှင့်တုံ့ပြန်ရန်ကျဆင်းမှု၏နှစ်ပေါင်း။ ကို item ထောက်ခံချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, ဖြေဆိုသူအသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, တိရစ္ဆာန် (bestiality), နှင့်ကလေးညစ်ညမ်း၏ Non-အသုံးပြုသူများသည်ဖြစ်စေအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြေဆိုသူ '' အခြေခံလူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ထိုကဲ့သို့သောလိင်, အသက်နှင့်အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေအဖြစ်ပစ္စည်းများပါဝင်သည်ပေးသောအွန်လိုင်းမှမေးခွန်းလွှာမှတဆင့် Self-အစီရင်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါဒေသစစ်တမ်းများစစ်တမ်းဖြေဆိုသူအားလုံးအတှကျလေ့လာမှုရဲ့အစမှာထင်ရှား၏။ "အရွယ်ရောက်က်ဘ်ဆိုက်များဆီသို့သဘောထားတွေ," အကဲဖြတ်အဖြစ်နှင့်အသက်အပိုင်းအခြားအားမရသဖြင့်ကြော်ငြာကလက်ရှိလေ့လာမှုကြိုတင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုလူမှုရေးအရအထိခိုက်မခံမေးခွန်းများ questionnaire, ဒီနည်းလမ်းကိုဤလေ့လာမှုအဘို့အ Self-အစီရင်ခံလိင် (cf, Birnbaum, 2000) ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးမြှင့် ။ ဒါ့အပြင်အားလုံးစစ်တမ်းပစ္စည်းများ-ရွေးချယ်မှုအတင်းအဓမ္မပေမယ့်ဖြေဆိုသူဟာ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (IRB) ကလိုအပ်သည့်အဖြစ်, မည်သည့်ပစ္စည်းကိုရန် "တုံ့ပြန်ရန်ကျဆင်းမှု" ကိုရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင်အားလုံးဖြေဆိုသူအမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အသင်း (ယား) ကထွက်သတ်မှတ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီပြုမူဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။
ဤလေ့လာမှုကိုအင်တာနက်အခြေပြုစစ်တမ်းတစ်ခုဖြင့်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်သုတေသနပြုလုပ်သောဤနည်းလမ်းသည်ဖြေကြားသူများ၏လက်လှမ်းမီနိုင်မှုနှင့်ရရှိနိုင်သည့်အမည်ဝှက်ခြင်းနှင့်လူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိသောသို့မဟုတ်အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသောအပြုအမူများသို့မဟုတ်သဘောထားများ (Mueller, Jacobsen, & Schwarzer, 2000) ကြောင့်သုတေသီများအသုံးပြုသောတိုးပွားလာမှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဖြေဆိုသူများသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကို ၀ င်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဖြေကြားသူများကသဘောတူရန်သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်ရန်ငြင်းဆန်ရမည့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပုံစံအနေဖြင့်လေ့လာမှုကိုမူလစာမျက်နှာကရှင်းပြခဲ့သည်။ အလားအလာရှိသောဖြေဆိုသူများကသဘောတူပါကပါ ၀ င်ရန်“ I Agree” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ “ ငါသဘောတူ” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ဖြေဆိုသူများအားမေးခွန်းလွှာများဖြည့်စွက်ရန် ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်သည်။
အဘယ်သူမျှမထိုအချိန်တွင်ဖြေဆိုသူကိုမဆိုဖော်ထုတ်သတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ, အမည်) အဘို့တောင်းလျှောက်ခဲ့သည်။ မေးခွန်းမှတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သို့မဟုတ်မည်သည့်အထူးသဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီမှလိုက်ဖက်မရနိုင်အောင်တုံ့ပြန်ရဲ့အမည်ဝှက်နှင့်လျှို့ဝှက်ကာကွယ်ပေးရန်အလို့ငှာခုနှစ်, ဖြေဆိုသူတစ်ဦး၏ ID နံပါတ်ပေးထားခဲ့သည်။
ဒေတာစုဆောင်းခြင်းပြီးနောက်, စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလူမှုသိပ္ပံ (SPSS) ဗားရှင်း 19 များအတွက်စာရင်းအင်း Package ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုကြိုတင်မဆိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမှ .05 ၏ alpha အဆင့်မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ Fisher က-Freeman က-Halton အတိအကျစမ်းသပ်စတင်ခြင်း, လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းအမျိုးအစားအသက်အရွယ်အကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကအောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်ခဲ့: မျှော်လင့်ထားသည့်ဆဲလ်ကြိမ်နှုန်းအရေအတွက်ကြောင့်ရှားပါးကွိ (ဆိုလိုသည်မှာ, ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု) အကဲဖြတ်လေ့လာမှုမှသေးငယ်တဲ့ခဲ့ကြသည်, ဒါကြောင့် (နမူနာအရွယ်အစားအတိုင်း chi-စတုရန်းစမ်းသပ် approximatesN) တိုးပွါး, ထို Fisher က-Freeman က-Halton အတိအကျစမ်းသပ်ပုဖို့ Fisher ကယ့်အတိအကျစမ်းသပ်ချဲ့ထွင် R ကို x ကိုကို C အမှု (cf, Freeman က & Halton, 1951) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်လိင်နှင့်“ စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်” ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလို့ငှာနောက်ပြန်လှည့်သွားသော (ဝေါ့ဒ်) ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်သေးငယ်။ မတူညီသောနမူနာအရွယ်အစားများ (Tabachnick & Fidell, 2007) ကဲ့သို့သောယူဆချက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသောကြောင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုများသည်ရေနံရှာဖွေရေးဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သည်။
စားပွဲတင် 2, 5.2% (မှာပြထားတဲ့အတိုင်းn = ဖြေဆိုသူ၏ 33) အင်တာနက်ကိုကလေးညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကို Self-သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အထီးဖြေဆိုသူ 16 (12.5%) ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအခဲ့ကြသည်, မိန်းမကိုဖြေဆိုသူ 17 (3.4%) ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်ရှိကြ၏။ သာ 630% ကို 8.6 ဖြေဆိုသူ (၏n ဖြေဆိုသူ Self-အစီရင်ခံ၏ = 54) bestiality ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှု, သေးထက်ဝက်နီးပါး (n = ဖြေဆိုသူ၏ 254, 40.3%) အရွယ်ရောက်ပြီးသူသာညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံထားသည်။ စားပွဲတင်3မှာပြထားတဲ့အတိုင်းဖြေဆိုသူနောက်ထပ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-သာ, bestiality နှင့်ကလေးညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားခဲ့ကြသည်။
လေ့လာမှုရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း၏ထောက်ခံမှုခုနှစ်တွင်မရှိဖြေဆိုသူကလေးညစ်ညမ်း၏တစ်ဦးတည်းသောအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံထားသည်။ သာ 1 အမျိုးသမီးတုံ့ပြန်မှသာစားသုံး bestiality ညစ်ညမ်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 9.8% (n = ဖြေဆိုသူ၏ 60) စားသုံးသတင်းပေးပို့သူကိုသာ .5% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ nondeviant နှင့် deviant ညစ်ညမ်းအချို့အရောအနှောကိုလောင် သာ deviant ညစ်ညမ်း (bestiality နှင့်ကလေး) ။
အဆိုပါဖော်ပြရန်ဒေတာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ, တိရစ္ဆာန်, နှင့်ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေး (စားပွဲတင်3ကိုကြည့်ပါ) ရှိခဲ့သည်အကြံပြုကတည်းကတစ်သုညယူမှုကိုဆက်စပ်မှုဆက်ဆံရေး၏ညှနျကွားဆုံးဖြတ်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, တိရစ္ဆာန်, နှင့်ကလေး: item ကိုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး dichotomous variable ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုညစ်ညမ်းအမျိုးအစားဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဖြေဆိုသူညစ်ညမ်း၏အသီးအသီးအမျိုးအစားအဘို့အ Non-အသုံးပြုသူများသည် (0) သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများအား (1) တစ်ခုခုကိုအဖြစ် coded ခဲ့ကြသည်။ စားပွဲတင်4မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် bestiality အသုံးပြုမှုအကြားတစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါသည်, rϕ အတူ (635) = .36 p <.01 နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၊ rϕ အတူ (635) = .27 p <.01 ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ တိရိစ္ဆာန် / အသားအရောင်ခွဲခြားမှုနှင့်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုရှိသောမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြသူများအတွက်သိသိသာသာအပြုသဘောဆောင်သောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသားများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုမှုကိုမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ rϕ အတူ (630) = -.28 p <.01, တိရိစ္ဆာန် / အသားအရေ, rϕ အတူ (630) = -.18 p <.01 နှင့်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ၊ rϕ အတူ (630) = -.17 p <.01 (ဇယား ၄ တွင်ကြည့်ပါ) ။
လိင်အားဖြင့် non-Deviant နှင့် Deviant ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုရာခိုင်နှုန်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူသာ (အရွယ်ရောက်ပြီးသူသာ) သို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကလေး / တိရိစ္ဆာန် (အရွယ်ရောက်ပြီးသူ + deviant) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်: Next ကို, ဖြေဆိုသူဖြစ်စေအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" ထို့နောက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" deviant ညစ်ညမ်း၏နောက်ပိုင်းတွင်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်နှစ်ခုအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Fisher က-Freeman က-Halton အတိအကျစမ်းသပ် (အပေါ် အခြေခံ.p <.01)၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငယ်ရွယ်သော“ စတင်ခြင်းအသက်” ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဇယား ၅ တွင်ပြသထားသည့်အတိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူ + ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများ၏ ၂၉% သည်အရွယ်ရောက်သူသာဖြေဆိုသူများ၏ ၁၀% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အကြား“ စတင်ခြင်းအသက်” ကိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ယင်းအစားအရွယ်ရောက်ပြီးသူမှသာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုသူအများစု (၈၉%) သည်အသက် ၁၉ နှစ်နှင့်အထက်အသက်အရွယ်ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများအတွက် ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည် (ဇယား ၅ တွင်ကြည့်ပါ) ။
"စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" နှင့်လိင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူနှိုင်းယှဉ်၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်းခဲ့ကြသည်လျှင်သုညယူမှုကိုဆက်စပ်မှုကနေသိသိသာသာတွေ့ရှိချက်နှင့် Fisher-Freeman က-Halton အတိအကျစမ်းသပ်အပေါ်အခြေခံပြီး, စာရေးသူတစ်ဦးနောက်ပြန် stepwise (Wald) ဆုံးဖြတ်ရန် Logistic ဆုတ်ယုတ်ကောက်ယူ deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု + ။ စားပွဲတင်6မှာပြထားတဲ့အတိုင်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မော်ဒယ် variable တွေကို, လိင် (နှစ်ဦးစလုံးမပါဝင်W = 7.69, p <.01) နှင့်စတင်ချိန် (W = 5.16, p <.02) ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်“ အသက်ငယ်သောအရွယ်” ရှိသူများသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန် .8 ဆပိုမိုများပြားသည်။ ထို့အပြင်အမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုသူဖြစ်ရန် .4 ဆပိုမိုများပြားသည်။ အဆိုပါ Hosmer နှင့် Lemeshow စမ်းသပ်မှု-, သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့ပေ2အတူ (4) = 6.42 p = .17, နောက်ဆုံးမော်ဒယ်ဒေတာ fit ညွှန်ပြ။ ထို့အပြင် multicollinearity အဘို့ကိုစမ်းသပ်ရန်ကှဲလှဲငွေကြေးဖောင်းပွမှုအချက်များ (VIF) နှင့်အခြေအနေအညွှန်းကိန်းတန်ဖိုးများကိုတွက်ချက်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်စိုးရိမ်ပူပန်စရာအကြောင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြသည် (Sex, VIF = 1.00; အသက်စတင်ခြင်း, VIF = 1.00; အခြေအနေအညွှန်းကိန်း <30) ။
ဤအဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအပေါ်အခြေခံပြီး, စာရေးသူ "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" နှင့်လိင်သိသိသာသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ်ဟောကိန်းထုတ်လျှင်အဆုံးအဖြတ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ယေဘုယျအား, ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနဲ့တိရစ္ဆာန်ညစ်ညမ်းနှစ်ဦးစလုံးလောင်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိပါလိမ့်မည်သောယူဆချက်မျှော်လင့်ထား, အစားရုံတစ်ခုတည်းကိုသာကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးထက်, ထောက်ခံခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ယောက်ျားကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိသော postulation ဒီအင်တာနက်က-based နမူနာအတွက်အမျိုးသမီးကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမြင့်မားပျံ့နှံ့၏မြော်လင့်သကဲ့သို့ကောင်းစွာထောက်ခံခဲ့သည်။
လိင်, လူကြီး, တိရိစ္ဆာန်, နှင့်ကလေးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက် zero-အလို့ငှာညမညသဘောတရား
အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-သာလျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်နှင့်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အားဖြင့် Deviant ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးနောက်သို့ (Wald) Logistic Regression
သို့သော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသာများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအကြားအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" အကြားအဘယ်သူမျှမခြားနားချက်များ၏စာရေးဆရာများ '' မျှော်လင့်အားမထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Fisher က-Freeman က-Halton အတိအကျစမ်းသပ် and Logistic ဆုတ်ယုတ်အပေါ်အခြေခံပြီး, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်သိသိသာသာအငယ် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" ကဖော်ပြခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုသာ nondeviant ညစ်ညမ်းအတွက်စေ့စပ်သောသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးသိသိသာသာငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအတွက်စေ့စပ်။
လက်ရှိလေ့လာမှု nondeviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" (ဆိုလိုသည်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ-သာ) တစ်ဦးကြီးများကအင်တာနက်-based နမူနာသုံးပြီး deviant ညစ်ညမ်း (ဆိုလိုသည်မှာ bestiality, ကလေး) ၏နောက်ပိုင်းတွင်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကပြစ်မှုထင်ရှားပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏နမူနာအပေါ်အားကိုးရသောကြိုတင်ကိစ္စတွင်လေ့လာမှုများ, ကိုကျော်ကာတိုးတက်မှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ကဲ့သို့သောလက်ရှိလေ့လာမှုကနေကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူမှကွာကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအများ၏လက်တွေ့သို့မဟုတ်မှုခင်းလူဦးရေကနေပြောင်းရွေ့ "အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏ယေဘုယျလူဦးရေ။ " ထို့အပြင်, ဒီလေ့လာမှုကလေးသည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအ deviant နှင့် nondeviant ညစ်ညမ်းနှစ်ဦးစလုံးကောက်ယူသို့မဟုတ်ရှိမရှိရှိမရှိအကဲဖြတ် သူတို့ Self-အစီရင်ခံသာကလေးညစ်ညမ်းစားသုံး။ ယေဘုယျအားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" နှင့်လိင်ဆက်ဆံဘို့ nondeviant နှင့် deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
သုတေသနတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအင်တာနက်ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူအများစု deviant ညစ်ညမ်း (cf, Endrass et al ။ , 2009) ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးစုဆောင်းနေကြသည်။ အကြံပြု လက်ရှိလေ့လာမှုမှာဖြေဆိုသူအဘယ်သူမျှမကအင်တာနက်ကလေးသည်ညစ်ညမ်း၏တစ်ဦးတည်းသောစားသုံးမှု Self-သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစားကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူအများစုလည်း nondeviant အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် bestiality ညစ်ညမ်းအပါအဝင်ညစ်ညမ်း၏အခြားပုံစံများကိုစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ 32 ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးသူများ, 60% (၏n = 19) ကိုလည်း 34% nondeviant အရွယ်ရောက်ပြီးသူနဲ့တိရစ္ဆာန်ညစ်ညမ်းနှစ်ဦးစလုံးကောက်ယူ (n = 11) ရုံ nondeviant အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းလောင်, သာ 6% (n = 2) တိရိစ္ဆာန်ညစ်ညမ်းခဲ့ (ဇယား3ကိုကြည့်ပါ) ။ ဤတွေ့ရှိချက်များက Seigfried (၂၀၀၇) လေ့လာမှုကိုထောက်ခံသည်။ ၎င်းတွင်အင်တာနက်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ် ဦး တည်းသောစားသုံးသူများမတွေ့ရပေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြုလုပ်နေသည်။ အနာဂတ်သုတေသနမှဤစုဆောင်းမှုများသည်၎င်းတို့၏အော့ဖ်လိုင်းရည်ရွယ်ချက်များ (ဥပမာလက်ဖြင့်အဆက်အသွယ်ထိုးဖောက်ခြင်း) နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်လက္ခဏာများ (ဥပမာအကြမ်းဖက်အကြမ်းဖက်သူများကိုစုဆောင်းခြင်းရှိမရှိ) ကိုဆန်းစစ်သင့်သည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ Rogers & Seigfried-Spellar, 2007; သတင်းစာတွင် Seigfried-Spellar ။
ယခင်သုတေသနနှင့်ကိုက်ညီယောက်ျားကအင်တာနက်ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိဖြစ်ဆက်လက်။ သို့သော်လက်ရှိလေ့လာမှုအမြိုးသမီးမြားမှုခင်းလူဦးရေများအတွက်လက်တွေ့အနေဖြင့်သုတေသနလုပ်ငန်းနမူနာအားဖြင့်ယခင်ကအကြံပြုထက်ပိုမိုကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Babchishin et al ။ (2011) အွန်လိုင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏နမူနာပါဝင်သည်ရာ 27 ဆောင်းပါးများ, တစ် Meta-analysis သည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Meta-analysis သည်များ၏ရလဒ်များကလေးညစ်ညမ်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအများစုအထီးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထို 27 ဆောင်းပါး, သာငါးခုလေ့လာမှုများအမျိုးသမီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူများပါဝင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, အွန်လိုင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သူများတစ်ခုလုံးကိုနမူနာ၏3ထက်လျော့နည်း% အမျိုးသမီးတွေ (Babchishin et al ။ , 2011) ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ၏အထွေထွေလူဦးရေထဲကနေနမူနာထက်လက်တွေ့သို့မဟုတ်မှုခင်းလူဦးရေအပါအဝင်ယခင်သုတေသန, ကလေးညစ်ညမ်း၏အမျိုးသမီးစားသုံးသူများပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဥပမာ, Seigfried et al ။ (2008) လေ့လာမှုတစ်ခုကအင်တာနက်-based သုတေသနလေ့လာမှုကနေ 10 Self-အစီရင်ခံကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ 30 အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် Seigfried-Spellar (2011) လေ့လာမှု Self-အစီရင်ခံကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ 20% မှာအမျိုးသမီးများကဖော်ပြခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် 17 (33%) ကလေးညစ်ညမ်းစားသုံးသူများ 52 လက်ရှိလေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောနမူနာလူဦးရေထဲကနေမိန်းမတို့အဘို့သူငယ်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကွာခြားချက်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်အနာဂတ်သုတေသနအကဲဖြတ်ရန်သငျ့သညျ။
အဆိုပါ variable ကိုလိင်နှင့်အတူ "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှသိသိသာသာဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စားပွဲတင်5မှာပြထားတဲ့အတိုင်း "။ စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" ဟုနောက်ပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်တဲ့သူတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည် nondeviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်အသက်ငယ် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" အစီရင်ခံအရွယ်ရောက် + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအဖြစ်နှင့်သောဖြေဆိုသူ အရွယ်ရောက်သူသာညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသက် 12-18 နှစ်အကြား Self-အစီရင်ခံစာတစ်ခု "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" ကိုနှစ်ကြိမ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိ။ နောက်ဆုံးတွင် Logistic ဆုတ်ယုတ် deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မော်ဒယ် variable တွေကို, လိင်နှင့်ပါဝင်သည် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်။ " ဟုပြောသည်အကြံပြုယောက်ျားသိသိသာသာမိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ် deviant ညစ်ညမ်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ပါဝငျစတင်ခဲ့သူကိုတစ်ဦးချင်းစီနောက်ပိုင်းအသက်အရွယ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအတွက်စေ့စပ်သောသူတို့အားနှိုင်းယှဉ် deviant ညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ကလေးညစ်ညမ်းလောင်တဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း nondeviant နှင့် deviant နှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်း၏အခြားပုံစံများ, စားသုံးကြသည်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုဖြစ်ဘို့, ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကအခြားပုံစံများအပြီးပေါ်ပေါက်ဖို့ပိုပြီးဖြစ်ရပါမည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှအရွယ်ရောက်ပြီးသူသာကနေအကူးအပြောင်း facilitated လျှင်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ဒီတိုးတက်မှုအကဲဖြတ်ရန်ရန်ကြိုးစားခဲ့ ရလဒ်အပေါ်အခြေခံပြီး, deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဤတိုးတက်မှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းမြားတှငျပါဝငျခွငျးအတှကျတစ်ဦးချင်းစီ "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ Quayle နှင့်တေလာ (2003) ကအကြံပြုထားသကဲ့သို့, ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူကပိုလွန်ကဲခြင်းနှင့် deviant ညစ်ညမ်းစုဆောင်းစတင်ရာမှ desensitization သို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ် satiation နှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခုအငယ်အသက်အရွယ်မှာအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုတစ်ဦးချင်းစီညစ်ညမ်း၏အခြား deviant ပုံစံများမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အ သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်အကြံပြုထားသည်။ ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုအောက်ပါအတိုင်းလျှင်, အနာဂတ်သုတေသန nondeviant ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်း၏အခြား deviant ပုံစံများကိုမှဦးဆောင်အနာဂတ်အစာစားချင်စိတ် satiation များအတွက်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုအကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။
ဤလေ့လာမှုကို“ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ဦး ရေ၏အထွေထွေလူ ဦး ရေ” မှကောက်ယူခဲ့သော်လည်းတွေ့ရှိချက်များသည်အင်တာနက်သုံးစွဲသူလူ ဦး ရေတစ်ခုလုံး၏ကိုယ်စားပြုသည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ တူညီသောနိုင်ငံ (ယူနိုက်တက်စတိတ်) မှဖြေဆိုသူများကိုနမူနာကောက်ယူခြင်းသည်ပြင်ပမှတရားဝင်မှုကိုကန့်သတ်ထားချိန်တွင်စာရေးသူများသည်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်တိရိစ္ဆာန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းတို့၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ လက်ရှိနည်းစနစ်သည်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်တိရိစ္ဆာန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတရားမဝင်သောနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများကိုပစ်မှတ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယခုလေ့လာမှုတွင်အင်တာနက်ပေါ်မှကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများသည်တရားမဝင်ကလေးညစ်ညမ်းသောအပြုအမူများနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေသည်။ ကလေးများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုဥပဒေအရတိုင်းပြည်များမှရွေးချယ်ခြင်းသည်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏တရားဝင်မှုသည်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ ဂျပန်၊ ထိုင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပျောက်ဆုံးနေသောနှင့်ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာကလေးများစင်တာ၊ ၂၀၁၀ တွင်ကြည့်ပါ။
ဒါ့အပြင်လိင်ကိုယ်စားပြုမှုလက်ရှိလေ့လာမှုမှာအချိုးအစားမညီမျှမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို (2009a) ၏အဆိုအရ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်လူဦးရေရဲ့ 50.7% အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်စုအတွင်း၌သို့မဟုတ်ပြင်ပမှာဖြစ်စေအင်တာနက်သူသူတို့သာတစ်ဦးချင်းစီကိုသုံးသပ်တဲ့အခါ (N = 197,871), 48.6% (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို, 2009b) အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ စစ်တမ်းနမူနာကောအင်တာနေရှင်နယ် (ကိုယ်ပိုင်ဆက်သွယ်ရေး, 2012) အတွက်လက်ရှိ panel ကိုအသက်အပိုင်းအခြားပေါ်အခြေခံပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအင်တာနက် panel ကို၏ 56% အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုအတွက်လိင်ကွာဟမှုဖြေဆိုသူ '' အလုပ်အကိုင်အဆင့်အတန်းနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်, ယောက်ျား, သိသိသာသာχမိန်းမများ homemakers ဖြစ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအချိန်ပြည့်နဲ့အခြိနျပိုငျးအလုပျခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်2 (9) = 73.82, p <.00 ယခင်သုတေသနတွင်အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများနှင့်“ အလုပ်များသူများ” ရှိသူများကိုအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူမှုများပြီးမြောက်ရန်အလားအလာနည်းပါးသည် (Cavallaro, 2012) ။ ထို့ကြောင့်လိင်ကွဲပြားမှုသည်အလုပ်အကိုင်အနေအထားကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ homemaker ဖြစ်သည့်အမျိုးသမီးဖြေကြားသူများသည်အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကိုအပြီးသတ်ရန်အချိန်ပိုရှိသည်။ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်သည့်အခါ“ စတင်ချိန်” နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းတို့အကြားသိသာသောဆက်နွယ်မှုတစ်ခုရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ rAB + c ကို = -.28, p <.01
လက်ရှိလေ့လာမှုတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအချိုးအစားသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အင်တာနက်လူ ဦး ရေကိုကိုယ်စားပြုသော်ငြားလည်း၎င်းသည်လက်တွေ့သို့မဟုတ်မှုခင်းဆိုင်ရာလူ ဦး ရေ၏အပြင်ဘက်ရှိလူများကိုနမူနာယူခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုကဤနည်းစနစ်သည်အခြားသုတေသနဒီဇိုင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အင်တာနက်ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစားသုံးသူအမျိုးသမီးများပိုမိုဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည် (ဥပမာ - လက်တွေ့သို့မဟုတ်မှုခင်းဆိုင်ရာလူ ဦး ရေ; Seigfried-Spellar & Rogers, 2010) ။
လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်လိင်ကွာဟမှုရှိခဲ့သည်ပေမယ့်လိင်အဘို့ကိုထိန်းချုပ်အခါ, အရွယ်ရောက်ပြီးသူသာအရွယ်ရောက်ပြီးသူ + deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် "စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်" နှိုင်းယှဉ်အကြားဆက်ဆံရေးနေဆဲသိသာကြီး, rAB + c ကို = -.30 နှင့်အတူ p <.01 ။ ဖြေကြားသူများ၏အမျိုးသားများကိုသာအကဲဖြတ်ရာတွင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသောယောက်ျားများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ငယ်ရွယ်သော“ စတင်ခြင်းအသက်” သတင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ Fisher-Freeman-Halton Exact Test = 15.79 with p <.01 ။ ဖြေဆိုသူအမျိုးသမီးများကိုသာအကဲဖြတ်သည့်အခါအရွယ်ရောက်ပြီးသူ၊ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသောအမျိုးသမီးများသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများတွင်ပါ ၀ င်သောအမျိုးသမီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရွယ်ရောက်ပြီးသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ငယ်ရွယ်သော“ စတင်ခြင်းအသက်” သတင်းဖော်ပြခဲ့သည် Fisher-Freeman-Halton Exact Test = 7.36 နှင့်အတူ p <.05
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တူညီသောအင်တာနက်-based သုတေသနဒီဇိုင်းပေမယ့်အင်တာနက်ကိုဖြေဆိုသူတစ်ဦး snowball နမူနာနဲ့အတူသုံးပြီးမကြာသေးခင်လေ့လာမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းအသုံးပြုရန်စတင်ခြင်း၏ Self-အစီရင်ခံတဲ့အငယ်အသက်အရွယ် deviant အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်သူတစ်ဦးချင်းစီ၌ဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်များကိုပုံတူကူးယူ ညစ်ညမ်း (Seigfried-Spellar, 2013) ။
ကလေးငယျမြားအားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှမလိုချင်တဲ့ထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. စာပေအတွက်ဆွေးနွေးငြင်းခုံရှိ၏ သို့သော်အနည်းငယ်လေ့လာမှုများများ၏အသက်အရွယ်အကဲဖြတ်ရန် တမင်္ဂလာပြုလုပ်သော nondeviant နှင့် deviant ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှု။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ စစ်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစားခြင်းများရှိသော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုရန်၊ တတ်နိုင်သော၊ အမည်မသိရန်ဆက်လက်ပြုလုပ်လိမ့်မည် (cf, Seigfried-Spellar, Bertoline, & Rogers, 2012) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူ (ဥပမာ၊ ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ) အရေအတွက်တိုးပွားလာခြင်းသည်လက်ရှိကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၂.၄၅ ဘီလီယံ (၃၅%) နှင့်အင်တာနက်သုံးစွဲမှုဆက်လက်တိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှတိုးပွားလာလိမ့်မည် (ITU, 2.45) ။ ဤတိုးတက်မှုသည်အချို့လူများကအခြားသူများအားမကြည့်သည့်အခါညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဒီရှာဖွေတူးဖော်မှုလေ့လာချက်အရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်“ စတင်ခြင်းအသက်” ဟာနောက်ပိုင်းမှာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများသည်ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၌ပါ ၀ င်ကြသော်လည်းယောက်ျားများသည်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများဖြစ်ရန်အလားအလာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Quayle နှင့် Taylor (35) မှအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းလူတစ် ဦး ချင်းစီမှစိတ်ဖိစီးမှုကင်းမဲ့ခြင်းသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအပြုအမူများသို့ကူးပြောင်းခြင်းမှတိုးတက်မှုအတွက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အနာဂတ်သုတေသနသည်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများ (ဥပမာ - အတွေ့အကြုံအတွက်ပွင့်လင်းမှု၊ သတိ၊ ထူးကဲမှု၊ သဘောတူမှုနှင့် neuroticism; Seigfried-Spellar & Rogers, ၂၀၁၃ ကိုကြည့်ပါ) သည် Guttman ကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအသုံးပြုမှုအတွက်တိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိမရှိအကဲဖြတ်သင့်သည်။
Babchishin, KM, Hanson, RK, & Hermann, CA (2011) ။ အွန်လိုင်းလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: Meta meta ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု: သုတေသနနှင့်ကုသရေးတစ်ဂျာနယ်, 23(1), 92-123 ။
Basbaum, JP (2010) ။ ကလေးညစ်ညမ်း၏အပိုင်ဒဏျ: pederasts ထံမှ voyeurs ခွဲခြားရန်တစ်ဦးကပျက်ကွက်။ အလျင်အမြန်ဥပဒေဂျာနယ်, 61, 1-24 ။
Birnbaum, MH (Ed က။ ) ။ (2000) ။ အင်တာနက်အပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်ချက်။ San Diego မှ,, CA: ပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
Cavallaro, K. (2012) ။ ဘဝအများစုကခက်ခဲစျေးကွက်သုတေသနမေးခွန်းဖို့အဖြေထုတ်ဖော်: အဘယ်ကြောင့်ပြည်သူ့ Panel များကို Join မဟုတ်လော စစ်တမ်းနမူနာကောအင်တာနေရှင်နယ်ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်မှရယူရန် http://www.surveysampling.com
Endrass, ဂျေ, Urbaniok, အက်ဖ်, Hammermeister, LC, Benz, C တို့, အဲလ်ဘတ်, တီ, Laubacher, အေ, & Rossegger, အေ (2009) ။ အင်တာနက်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်စော်ကားမှုများသုံးစွဲမှု။ BMC စိတ်ရောဂါကုသမှု, 9(43), 1-7 ။
ရေလွှမ်းမိုးခြင်း, အမ် (2009) ။ ကလေးများနှင့်လူငယ်များကြားတွင်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုများ၏ပျက်ဆီး။ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 18, 384-400 ။
Freeman က, GH & Halton, JH (1951) ။ အရေးပေါ်ကုသမှု၊ မထိုက်မတန်ကောင်းမွန်မှုနှင့်အခြားအရေးပါသောပြproblemsနာများကိုတိကျစွာကုသမှုကိုမှတ်သားပါ။ Biometrika, 38, 141-149 ။
Hollinger, RC (1988) ။ ကွန်ပျူတာဟက်ကာတစ်ဦး guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုလိုက်နာပါ။ လူမှုဗေဒနှင့်လူမှုသုတေသန, 72(3) ။ 199-200 ။
ပျောက်ဆုံးနေသော & အသုံးချကလေးများအတွက်နိုင်ငံတကာစင်တာ (2010) ။ ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်း: မော်ဒယ်ဥပဒေပြုခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်။ (6th ed ။ ) ။ မှရယူရန် http://www.icmec.org
International Telecommunication Union ။ (2011) ။ 2011 အတွက်ကမ္ဘာကြီး: အချက်အလက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းများ။ မှရယူရန် http://www.itu.int/ict
Johansson, T. & Hammaren, N. (2007) ။ Hegemonic ပုလ်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လူငယ်များ၏သဘောထားနှင့်ဆက်ဆံမှု။ အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့ Stutides ၏ဂျာနယ်, 15, 57- 70 ။
McKee, အေ (2007) ။ လူငယ်, ညစ်ညမ်းနှင့်ပညာရေး: သင်ငါမပါဘဲတက်ကြီးထွားလာ၏အဖေရဲ့အညစ်ညမ်းစာအုပ်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟု။ Metro မဂ္ဂဇင်း, 155, 118-112
မစ်ချယ်, K. , Wolak, ဂျေ, & Finkelhor, D. (2007) ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအသနားခံခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်မလိုလားအပ်သောထိတွေ့ခြင်းဆိုင်ရာလူငယ်များ၏အစီရင်ခံစာများ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး၏ဂျာနယ်, 410, 116-126 ။
Quayle, အီး & တေလာ, အမ် (2002) ။ ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အင်တာနက်။ Deviant အပြုအမူ: An Interdisciplinary ဂျာနယ်, 23, 331-361 ။
Quayle, အီး & တေလာ, အမ် (2003) ။ ကလေးသူငယ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုရှိသောလူများ၌ပြproblemနာရှိသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုပုံစံ။ Cyberpsychology နှင့်အပြုအမူ, 6(1), 93-106 ။
ရော်ဂျာ, အမ် & Seigfried-Spellar, K. (2011) ။ အင်တာနက်ကလေးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ: ဥပဒေရေးရာပြandနာများနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနည်းဗျူဟာများ။ T. Holt (ed ။ ) ၌, တွင်-လိုင်းရာဇဝတ်မှု: ဆက်စပ်မှု, ဖြစ်ခြင်း, နှင့်ဆက်စပ်။ Durham, မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား: ကာရိုလိုင်းနားပညာရေးဆိုင်ရာနှိပ်ပါ။
ရော်ဂျာ, MK & Seigfried-Spellar, KC (2012, ဖေဖော်ဝါရီ) ။ အသုံးချကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အမူအကျင့်မော်ဒယ်: ဒစ်ဂျစ်တယ်မှုခင်းဆေးပညာအတွက်အမူအကျင့်သိပ္ပံများ၏အခန်းကဏ္ဍ။ မှုခင်းသိပ္ပံ 64th နှစ်ပတ်လည်သိပ္ပံအစည်းအဝေး, အတ္တလန်တာ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီမှာ presentation, ဂျော်ဂျီယာ။
Seigfried, K. , ချစ်စရာကောင်းတဲ့, R. , & ရော်ဂျာ, အမ် (2008) ။ အင်တာနက်ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်။ ဆိုက်ဘာ Criminology,2အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်(1), 286-297 ။
Seigfried-Spellar, KC (စာနယ်ဇင်း၌) ။ ကလေးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကိုယ်တိုင်သုံးစွဲသူများအတွက်ရုပ်ပုံအကြောင်းအရာ၏နှစ်သက်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ အမ်ရော်ဂျာ & K. Seigfried-Spellar (စီးရီး Eds ။ ) ၌တည်၏ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအဘို့အင်စတီကျု, လူမှုရေးပညာပေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဟောပြောပွဲမှတ်စုများ: ဒစ်ဂျစ်တယ်ဥပဒေရေးရာတွေကတော့နှင့်ကွန်ပျူတာရာဇဝတ်မှု။ နယူးယောက်: Springer. ထုတ်ဝေမှု 2012 များအတွက်လက်ခံခဲ့သည်။
Seigfried-Spellar, KC (2013, ဖေဖော်ဝါရီလ) ။ စတင်ခြင်းနှင့်လိင်၏အသက်အရွယ်အားဖြင့် deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ် Seigfried-Spellar နှင့်ရော်ဂျာ (2011) လေ့လာမှုပုံတူ။ မှုခင်းသိပ္ပံ 65th နှစ်ပတ်လည်သိပ္ပံအစည်းအဝေး, ဝါရှင်တန်ဒီစီ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီမှာ presentation
Seigfried-Spellar, KC (2011) ။ အင်တာနက်ကလေးသည်ညစ်ညမ်းစားသုံးသူများကကောက်ယူပုံရိပ်တွေအမျိုးအစားခန့်မှန်းအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ အတည်မပြုရသေးသောစာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း, Purdue တက္ကသိုလ်, အနောက် Lafayette, IN ။
Seigfried-Spellar, KC, Bertoline, GR, & Rogers, MK (2012) ။ အင်တာနက်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများ၊ အမေရိကန်၏ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အခန်းကဏ္။ ။ P. Gladyshev & M. Rogers (စီးရီးအက်ဒ်။ ) တွင် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအဘို့အင်စတီကျု, Social- ပညာပေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာဟောပြောပွဲမှတ်စုများ: Vol ။ 88 ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်မှုခင်းရေးရာနှင့်ဆိုက်ဘာရာဇဝတ်မှု (စစ။ 17-32) ။
Seigfried-Spellar, K. & Rogers, အမ် (2010) ။ အမျိုးသမီးကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများအတွက် neuroticism နည်းပါးခြင်းနှင့် hedonistic စရိုက်များ။ Cyberpsychology, အပြုအမူ, နှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 13(6), 629-635 ။
Seigfried-Spellar, KC & Rogers, MK (၂၀၁၃) ။ တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုများက Self-အစီရင်ခံအင်တာနက်ကလေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကခွဲခြားဆက်ဆံမှု။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။
Sheldon, K. & Howitt, ((2008) ။ pedophile ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်လိင်စိတ်ကူးယဉ် - မည်သည့်ပုံစံကမဆိုကျေနပ်ဖွယ်ရာအင်တာနက်လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်အသစ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသလား။ ဥပဒေရေးရာနှင့် Criminological စိတ်ပညာ, 13, 137-158 ။
စစ်တမ်းနမူနာကောအင်တာနေရှင်နယ် (2009) ။ အဆိုပါအွန်လိုင်းကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် verification။ စစ်တမ်းနမူနာကောအင်တာနေရှင်နယ်ရဲ့ web site ကိုမှရယူရန်: http://www.surveysampling.com
Tabachnick, BG & Fidell, LS (2007) Multivariate စာရင်းအင်းများအသုံးပြုခြင်း (5 ed ။ ) ။ ဘော်စတွန်, MA: Pearson ပညာရေး, Inc
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို (2009a) ။ ပြည်နယ်နှင့်ကောင်တီလျင်မြန်စွာအချက်အလက်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်မှရယူရန်: http://www.quickfacts.census.gov
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသန်းခေါင်စာရင်းဗျူရို (2009b) ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်အသုံးပြုမှု: အောက်တိုဘာလ 2009။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသန်းခေါင်စာရင်းဗျူရိုရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်မှရယူရန်: http://www.census.gov
Wolak, ဂျေ, Finkelhor, D ကို, မစ်ချယ်, K. , & Ybarra, အမ် (2008) ။ အွန်လိုင်း“ သားကောင်” များနှင့်သူတို့၏သားကောင်များ - ဒဏ္Myာရီများ၊ အဖြစ်မှန်များနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်း။ အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်, 63(2), 111-128 ။
လူ့အပြုအမူ 29 (2013) 1997-2003, Kathryn C. Seigfried-Spellar, Marcus K. ရော်ဂျာအတွက်ကွန်ပျူတာကနေပုံနှိပျ "deviant ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုတစ်ဦး Guttman ကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုနောက်ကိုလိုက်ပါသလား" Elsevier ထံမှခွင့်ပြုချက်ဖြင့်။